“Ngavagare nevanhu vakaremara kana dai zvaikwanisika vachibvunza nekuona mararamiro avo vafambe vachinoona munzvimbo dzinobatsira vakaremara, atingati ma disability service organisations vachinoona kuti vanhu vakaremara vanorarama sei."
“Hazvibatsire kuti munongosangana nevanhu kuno kuma workshops vane ma disabilities."
Vanoenderera mberi vachiti, "Munoona kuti vanouya kuma workshops, they are privileged, but ivo vane matambudziko chaivo chaivo hamusi kusangana navo.Saka kuti munyatsobata kuti vari kuita matambudziko eyi sometimes hamuzvinzwisise. Saka ndati dai vanhu vamboenda, vaspenda a day vari kuma homes iwayo, vozonyora nyaya dzavo nemunzira kwayo yekuti vanenge vakuziva zviri kuitika.”
VaMusira vakati, “Kana une urema usingaone, usingagone kufamba, uchishandisa wheel chair, kana zvimwe zvinhu zvakadaro vanhu vanofunga kuti uri murombo, hapana chaunoziva kunyange hazvo iwe wakadzidzira basa racho uchirigona zvemandorokwati." Vanotiwo, "Vanhu vanofunga kuti vakakuona chete uchifamba, kana wakamira une munhu ari kukubatsira vanofunga kuti uri kutotsvaga rubatsiro, hapana chaungaita.”
VaLupahla vakaudza Studio 7 vachiti, “Saka munhu ane wheel chair anokwira sei ma steps pasina ma ramps? Ma computers emuma libraries enzvimbo dzinotapa nhau haana iya inonzi speech software pachirungu yekuti munhu asingaone kana achida kushandisa computer anongopinda mu library ostrima internet, oshandisa computer sevamwe." VaLupahla vanoti, " Izvozvo zvese iri nyaya yekushayikwa kwehurongwa, iya inonzi pachirungu disability policy inosungira kuti chikoro chega chega chiinclude vanhu vakaremara. Muchaona kuti ma chamber acho kana ma shanks haasi accommodative kumunhu akaremara.”